DDoS Inopesana uye Kudzivirirwa KuBotnets pamwe neSemalt Tips
Maererano nemirairo yevashambadziri, kuvhara kwebhanets nhamba yakawanda yemakombiyuta kuita mabasa asina kukodzera. Simba rakadaro rinoita kuti vatengesi veIndaneti vaite zvitadzo zvakasiyana-siyana online. Kazhinji kacho, mhaka idzi hazvizivikanwi uye dzinogona kukuvadza mukurumbira wesangano rako pasina nguva. Semuenzaniso, muna 2016, botnet yakashandiswa pakugadzira DDoS kutambudzwa, ichikanganisa dzakawanda zvemashoko ezvekuchengetedzwa kwemashoko akaita se Twitter. Kana iwe uchigamuchira maawa akawanda zuva rega rega, mikana ndeyokuti email yako kero inozivikanwa se spammers - lstn apollo. Igor Gamanenko, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, anoti neropafadzo, tine nhamba yakawanda yekutsvaga mitambo ye spam, iyo yakawanda inobatsira kudzivisa kuuya kwemashoko asingabvumirwe uye asingakanganisi.
Hatigoni kufuratira chokwadi chokuti hazvibviri kukwanisa kubvisa botnets uye spam emails. IFBI yakaongorora sangano reSteate reUnited States rine maonero ekuona makombiyuta ane utachiona. Somugumisiro, kutsvakurudza uku kwakaratidza kuti vaseki vanogona kutora simba pamusoro pe subcommittee makombiyuta pose pavanenge vachida. Pasinei nekukura kweiyo nyaya, vashandisi vevashandi vekombiyuta havawanzozivi nezvebhodnets..Botnets ndiyo hondo yekombiyuta uye mafoni anotengesa ane utachiona uye anotengesa kuita zvimhosva zvepaIndaneti, pasina ruzivo rwevashandi. Vatengesi vanogona kuraira mabhota kure uye vakukumbira kuti vape mashoko anonyatsoziva, kuparadzira malware, kutumira spam emails, uye kutanga DDoS kutambudzwa.
Kutumira spam uye kugovera mavairasi uye malware
Chokutanga pane zvose, unofanira kuziva zvose nezve spam. Yakagadzirirwa kukutumira iwe emafayenzi uye anogumbura emaimeri. Mamwe makombiyuta akanganisa anosungirwa kutumira mameseji e-spam kune nhamba yakawanda yeameri e-mail. Chinangwa chemashoko e-spam aya ari kuparadzira mavhairusi uye kugovera malware paIndaneti. Iwe unogona kuve wakakanganiswa maeameri akadaro sezvibereko zvavanopa zvinoratidzika kuva zvehupamhi hwepamusoro uye zvakadai zvinotengeswa zvakakwana, asi mishandirapamwe yakadaro inobatsira chete kune vanokuvadza, uye haugoni kuwana mhindu kubva kwavari. Somuenzaniso, kana iwe ukagamuchira emails kubva kune mumwe muNigerian achiti wakakunda $ 140 mamiriyoni, ungada kugovera kana kumubata zvakare. Izvi ndezvekutamba kwemashoko anoedza kunyengedza vashandisi uye vanowanzoba mabhizimisi enyu uye mapepa.
Ramba uri mupfungwa, haufaniri kupindura mharidzo ye spam. Kunyanya, haufaniri kuisa pane zvinyorwa zve email zvausingazivi nezvazvo. Dambudziko re-email re spam rave rave nhepfenyuro nenguva, uye huwandu hwemabhaketani huri kushanda nekuda kwayo. Nhamba yakawanda yebhoti inotumirwa kune zvekutengeserana uye masangano makuru ekuwana mari. MaBotnets ave achitsvaga makambani akadaro eEvernote uye Feedly, uye vatengesi vakaedza kuderedza mari kuburikidza nekutyisidzira kwekuramba-kwe-kushungurudzwa.
Tinoda botnet kudzivirira here?
kombiyuta yakave yakakonzerwa neBob iri pasi pekutungamirirwa kwehacker uye haigoni kudzorwa nemunhu chaiye. Ichanyarara inopindira mu-cyber-mhosva uye inogona kuita nhamba yakawanda yezvisiri pamutemo. Mune mamwe mazwi, kana kombiyuta yako ine utachiona, haikwanisi kushanda zvakanaka, kuita kuti internet ive nzvimbo yakachengeteka uye isina kufadza kune wese.